Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Aogositra 2018 à 20:08
34 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Febroary 2018 à 06:51 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Aogositra 2018 à 20:08 (hanova) (esory)
Atao hoe "[[Abrahamika (finoana)|abrahamika]]" ireo fivavahana nipoitra tamin'ny fivavahan'i [[Abrahama|Abrahama,]] indrindraindrindra ny [[jodaisma]] sy ny [[kristianisma]] ary ny [[silamo]].
=== Monoteisma tao amin’ny fivavahana hebreo sy jiosy ===
Ny mpikarona momba ny fivavahana dia milaza fa tsy tonga dia monoteista ny fivavahan'ny hebreo fa [[henoteisma]] izay nomena anarana hoe ''[[yahvisma|iahvisma]]'' satria ninoan'ny Hebreo taloha ny fisian'andriamanitra maro nefa i [[Yahweh]] no nanataony ho andriamaniny nolovany tamin'ny razany, satria samy nanana ny andriamaniny ny firenena tsirairay. Tany am-pahababoana any Babilona vao nanomboka ny finoan'ny Jiosy ny maha andriamanitry ny firenena rehetra sy izao rehetra izao an'Andriamanitra.
Ny mpikaroka sasany kosa dia milaza fa ny fanambaràna ny maha tokana an’i YahwehIahveh dia niaraka tamin’ny fivoahan’ny [[Zanak'i Israely|Zanak’i Israely]] avy ao Ejipta. Ny anaran’ny andriamanitry ny Hebreo dia tsy azo tononina, fa nosoratana fotsiny amin’ny litera hebreo efatra izay azo adika amin’ny litera latina hoe ''[[Yahweh|YhwhIhvh]]''. Ny fanambaran-tenan’i Yahweh dia niseho tamin’ny fotoana nahitan’i [[Mosesy|Moizy]] an’ilay roimemy mirehitra nefa tsy nety levona izay nilazan’Andriamanitra hoe “Izaho no ilay misy” (Eks. 3.14 ao amin’ny [[Baiboly malagasy|Baiboly Masina]]). Ny Baiboly hebreo (na [[Tanakh]]) maneho fa i YahwehIahveh ihany no misy fa ny andriamanitra hafa dia tsy misy.
=== Monoteisma ao amin’ny fivavahana kristiana ===
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/874867"